Qalabka korontada ku shaqeeya ee loo yaqaan 'PVC PVC' ee nolosha dheer ee robot koronto ah 18V 12Ah LiFePO4 baakid batari oo leh soo saaraha badbaadiyaha ugu fiican iyo alaab-qeybiye | LIAO
PVC sanduuqa meertada dheer nolosha robot koronto 18V 12Ah LiFePO4 baakid batari leh nabadgelyada ugu fiican
Shiinaha soo saaraha 19 inch rack sii kordhaya 48V 50Ah lithium ion batari (LiFePO4) isgaarsiinta
Abs casing 2000 + wareegyada nolosha lithium ion batari 12V 100Ah oo leh BMS
Nooca Bolt-ka nooca loo yaqaan 'Bolt' prismatic 3.2V 10Ah LiFePO4 unugga baytariga ee korontada iyo keydinta tamarta
Batari mover mover batroolka LAXpower-1230 12V 30Ah LiFePO4 baakid batari leh xeedho gudaha ku jirta iyo SOC
SOC iyo gacanka waxaa kujiray baako batari 36V 40Ah LiFePO4 oo loogu talagalay mootada korantada / mootada / gawaarida gawaarida
Iibinta iibka korantada badan ee la qaadan karo oo badan oo wata wax soo saarka AC iyo DC
1. Dahaarka PVC 18V 12Ah LiFePO4 baakid batari loogu talagalay robot koronto.
2. Nolosha wareegga dheer: Unugga batroolka lithium ion ee dib loo soo celin karo, wuxuu leeyahay in ka badan 2000 wareeg oo 7 jeer ah batteriga aashitada rasaasta.
Qaabka Lambar ENGY-F1812N
Awoodda magaceed 18V
Awoodda magaca 12Ah
Ugu badnaan lacag joogto ah 15A
Ugu badnaan dheecaan joogto ah 15A
Nolosha wareega ≥2000 jeer
Heerkulka kharashka 0 ° C ~ 45 ° C
Heerkulka dheecaanka -20 ° C ~ 60 ° C
Heerkulka keydinta -20 ° C ~ 45 ° C
Cabbir 215m * 40mm * 155mm
Codsiga Robot, koronto bixin
3. Miisaanka fudud: Qiyaas ahaan 1/3 culeys baytariyada aashitada leedhka.
4. Badbaadinta sare: Ku dhowaad nooca batari lithium ee ugu ammaansan ee laga aqoonsan yahay warshadaha.
5. Heer is-siideyn oo hooseeya: ≤3% ee awoodda magacaabidda bishiiba.
6. Tamarta cagaaran: Ma laha wasakhaynta deegaanka.
7. Saamayn xusuus la'aan, cufnaanta tamarta sare.
Macluumaadka Warshadaha Robot-ka Korontada iyo Wararka
Robotku waa mashiin otomaatig ah. Farqiga u dhexeeya ayaa ah in mashiinkan uu leeyahay xoogaa caqli ah oo la mid ah aadanaha ama makhluuqaadka, sida aragtida, qorsheynta, dhaqdhaqaaqa, iyo isku dubaridka. Waa mashiin otomaatig ah oo leh dabacsanaan heer sare ah.
Iyada oo sii xoogeysaneysa fahamka dadka ee ku saabsan dabeecadda caqliga badan ee aaladaha robotikada, robotikada waxay bilaabeen inay si isdaba joog ah u dhex galaan dhammaan aagagga howlaha aadanaha. Marka la isku daro astaamaha lagu adeegsado arimahan, dadku waxay soo saareen aalado kala duwan oo gaar ah iyo aalado kala duwan oo caqli badan oo leh aragti, go'aan qaadasho, ficil iyo awood is-dhexgal. In kasta oo aysan jirin qeexitaan adag oo sax ah ee aaladaha, waxaan rajeyneynaa inaan fahano nuxurka aaladaha: aalado ayaa ah aalado farsamo oo si toos ah shaqada u qabta. Waxay aqbali kartaa amarka aadanaha, waxay maamuli kartaa barnaamijyo horay loo sii qorsheeyay, ama waxay u dhaqmi kartaa mabaadi'da iyo barnaamijyada lagu farsameeyay teknoolojiyada sirdoonka farsamada. Hadafkeedu waa inay caawiso ama bedesho shaqada aadanaha. Waa badeecad ka kooban isugeyn heer sare ah, mechatronics, kumbuyuutaro, qalab iyo bionic, waxayna leedahay adeegyo muhiim ah warshadaha, daawada, beeraha, adeegga, dhismaha, iyo xitaa goobaha milatariga.
Batariga lithium-ka ee robot-ka ah ayaa ah mid aad u hufan, la qaadi karo, la qaadi karo, iyo baakad lithium batari ku filan oo si gaar ah loogu talagalay tijaabiyeyaasha mashiinka moobiilka. Tijaabiyaha aaladda robot wuxuu u baahan yahay ilbiriqsi weyn oo deg deg ah markii uu bilaabmayo, wuxuuna u baahan yahay batteriga sareeya waqtiga shaqada oo joogto ah.
Hore: Waxqabadka sare 48V 20Ah lithium ion batari batroolka korontada / mootada
Xiga: Dheecaan weyn oo dheecaan weyn ah batroolka 48V 30Ah lithium ion ee mootada korantada
Naqshad fidsan oo miisaankeedu yahay 24V 10Ah lithium batari LiFePO4 baakidhka batari ee curyaanka curyaamiinta ee korantada
Awoodda sifiican u bixitaanka waxqabadka 12V 130Ah LiFePO4 baakidh batari oo loogu talagalay guriga mootada iyo karavan
Dheecaan weyn oo dheecaan weyn ah batroolka 48V 30Ah lithium ion ee mootada korantada
Abs casing light weight 2000 wareegyada 12V 200Ah lithium ion baytariga leh BMS-ka lagu dhex-dhisay
Waxqabadka sare 48V 20Ah lithium ion batari batroolka korontada / mootada